Sago Mini Monsters, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Miresaka indray momba ny lalao iray izay azo sintonina maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra isika. Amin'ity indray mitoraka ity isika dia miresaka momba ny Sago Mini Monsters, lalao ho an'ny kely indrindra amin'ny trano, eo anelanelan'ny 2 sy 4 taona, mba hanana fotoana mahafinaritra amin'ny famolavolana ny biby goavam-be, izay hahafahanay manampy maso, tandroka ary vava. , Ankoatra ny fandokoana ny tenantsika amin'izay tiantsika hanome sakafo azy ireo avy eo, borosio ny nifin'izy ireo ary makà sary ny zavatra noforoninay ... Sago Mini Monsters dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy avelako amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Sago Sago Toys, mpamorona ny Sago Mini Monsters dia manam-pahaizana manokana amin'ny famoronana fampiharana ho an'ny kely indrindra amin'ny trano, fampiharana izay tian'ny ankizy sy atokisan'ny ray aman-dreny. Maro amin'ireo fampiharana azy, raha tsy izy rehetra, dia natao hanentanana ny fahafahan'ny ankizy alokaloka, hamorona ary hahafanta-javatra amin'ny fampiharana azy, fampiharana izay mampiseho positivism ary koa mahafinaritra. Ny rindran'ity mpanamboatra ity dia mety amin'ny fifandraisana voalohany amin'ireo zanatsika amin'ny fitaovana nomerika, na finday avo lenta na takelaka. Sago Mini Monsters dia manana salan'isa 4 avy amin'ny 5 amin'ny hevitra, izay mampiseho amintsika ny fahafahany ho fampiharana ho an'ny ankizy kely.
Sago Mini Monsters endri-javatra
Ovao ny maso, tandroka ary vava
Lokoy ny biby goavanao
Fahano sakafo matsiro izy ireo
Aosory ireo nify goavambe ireo
Handravaka ny biby goavanao
Makà sary hitahiry sy hizarana
Mety amin'ny taona 2-4 taona
Tsy misy fanampiny azo vidiana na dokam-barotra amin'ny antoko fahatelo, amin'izay ianao sy ny zanakao dia afaka milalao tsy misy fahatapahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Sago Mini Monsters, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny AirPods dia tokony ho nahemotra noho ny olana eo amin'ny fifandraisana